मानिसका यी १३ अंग फरफराए के फल प्राप्त हुन्छ ? जानीराखौं - हरियाली नेपाल
मानिसका यी १३ अंग फरफराए के फल प्राप्त हुन्छ ? जानीराखौं
Post published:२३ भाद्र २०७८, बुधबार ०५:४४
काठमाण्डौंः मानिसको शरीर अन्य प्राणीको तुलनामा निकै संवेदनशिल हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार यही कारण भविष्यमा हुने घटनाप्रति हाम्रो शरिरले पहिले देखी नै आशंका समेत गर्ने गर्दछ ।
शरीरमा विभिन्न अंगहरूले वेला वेलामा संकेत देखाई राखेका हुन्छन । शरीरमा विभिन्न प्रकारका कम्पहरू वेला वेलामा भइरहन्छन् । कुनै अंग विशेष हुने यस्तो कम्पनलाई अंगस्फुरण भनिन्छ । यसरी स्वस्थ अवस्थामा कुनै अंग विशेष फरफराउदा के फल हुन्छ भन्न्ने कुरा पनि ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । यस्तो फलको भोगी हुन सर्वप्रथम शरीर स्वस्थ हुनु आवश्यक छ । रोगी शरीरमा अंगस्फुरणको कुनै फल हुँदैन ।
विभिन्न सकुनले शुभाशुभ बताएजस्तै अंगस्फुरणले पनि व्यक्तिको जीवनमा शुभाशुभको संकेत गरिरहेको हुन्छ । यस्तै सङ्केतन मध्येको एक अंग फरफराउनु पनि हो । शरीरका लक्षण जस्तै अंग अनुसार फरफराएको शुभाशुभ फल ज्योतिष शास्त्रमा बताइएको छ ।
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको चिउडो फडफडाउँछ, उक्त व्यक्तिलाई स्त्री खुस मिल्छ र साथमा धनलाभ पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
तपाईंलाई धेरै रिस उठ्छ ? शरीरमा यस्ता असर
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०५:५५
यौन जिवन सुखी बनाउने ५ आसन: जस्ले सेक्स गर्दा चरम आनन्द आउँछ
१७ आश्विन २०७७, शनिबार ०९:२९
पहिलो पटक पुरुषले जन्माए बच्चा
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:००
वैवाहिक जीवनलाई कसरी सुखी बनाउने विज्ञका ५ सल्लाहसहित